Dowladda Somaliland Oo Culimadda Kala Shiraysa Gudashadda Xajka - Radio somit
Dowladda Somaliland Oo Culimadda Kala Shiraysa Gudashadda Xajka
Xukuumadda Somaliland ayaa shir la yeelatay culimadda dalka iyo shirkadaha ka shaqeeya arrimaha Xajka, kadib markii ay Somaliland saluugtay tiradda ay Soomaaliya siisay ee sanadkan tegaysa Xajka.
Shir uu guddoominayey Madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil (Saylici), ayaa lagu lafo-guray caqabadaha soo wajahay dadkeenna ee ku saabsan gudashada waajibaadka.
Gaar ahaana qoondada ay dawladda federaalka Soomaaliya Somaliland siisay ee ah 350-ka ah ee loo qorsheeyey dalkeenna Jamhuuriyadda Somaliland.
Kulankaasi waxaa ka soo qayb galay culimada dalka qaarkood iyo qaar ka mida shirkadaha ka shaqeeya arrimaha Xajka ee Somaliland ka hawl galla.
Previous articleXuska Maalinta Qaran ee Talyaaniga Oo ka dhacday muqdisho somaliya…
Next articleWar dag dag ah Wasaaradda waxbarashasa Ayaa…